काठमाडौं (पहिचान) फागुन ३० – जन्म, मरण प्राकृतिक नियम हो । प्रकृति अनुकुल वाताबरणको संयोगले मानिसको जन्म हुन्छ । जन्मनु कसैको दोष हैन । यो हामी सबैले बुझेका छौ । तर किन याहा बुझ पचाइन्छ ? किन विभेद गरिन्छ ?
सामाजिक धार्मिक कारण देखाइ यहाँ त बाबु आमा समेत पराइ हुन्छन । अबोध जन्मने बालकको दोष देखाएर परिवार, समाज र राज्यले समेत हरदम अन्याय र अत्याचार गरिरहेको छ । फरक पहिचान खोज्नु के गल्ती हो ?
बाबु आमा समाजिक वातावरण वा कुन कारणले भिन्न पहिचानको बाल बच्चाको जन्म हुन्छ यो कुराको खोजि गर्ने काम राज्यको होइन र ? किन एकोहोरो भएर पहिचान खोज्नेहरु बिरुद्दमा लागिरहन्छ यो परिवार, यो समाज र यो राज्य ?
मानिस स्वतन्त्र प्राणी हो । मानिसले स्वतन्त्र भएर बाच्न पाउनु पर्छ । यो लोकतन्त्र र संसारको मान्यता हो । तर खै भिन्न पहिचान खोज्नेहरुको लागि लोकतन्त्र ? खै मानव अधिकार ? कुनै पनि देशको नागरिकले स्वतन्त्र नागरिक भएर बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ । तर किन यहाँ नागरिकलाई यो वा त्यो बाहानामा नागरिकता, रोजगारी, विवाह आदि धार्मिक, सांस्कृतिक कुराहरुबाट बञ्चित गराइन्छ ?
नेताको भाषण सुन्ने हो भने उहाँहरुले नजाने नबुझेको केहि छैन सबै कण्ठ छ, गर्दैनौ हुदैन त उहाहरुले कहिले भन्नु हुन्न । तर कामको नाममा पहिचानको लडाई लडने नागरिकका लागि खै के गरियो ? यो अन्याय र अत्याचार सहेर कति बसौ ?
संसारमा अधिकारका नाममा विभिन्न नीति नियम बनेका छन । संघ संस्थाहरु छन । राज्यले ती नीति नियम संघ संस्थाहरुमा सहमति र सम्झौता गर्दै पनि आइरहेको छ । यसै मध्यको एक हो नेपालको मानव अधिकार आयोग । तर खै कार्यान्वयन ?
म मानव अधिकारबादीहरुलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु, मानव अधिकार भनेको एउटा मान्छेले आमाको गर्बमा रहेदेखी जन्मेर नमरुनजेलसम्म पाउनु पर्ने अधिकार हैन र ? कि तपाईको परिभाषा अर्कै केही छ ? त्यो पनि जान्ने इच्छा छ ।
तपाइको संगठनको काम, राज्यबाट वा राज्यका कोही कसैबाट काहीँ कसैमाथि थिचोमिचो अन्याय भै रहेको छ भने पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि राज्य वा सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउनुु, पीडितको पक्षबाट न्यायका लागि लडेर भए पनि अधिकार दिलाउनु पर्ने हैन र ? खै के उपलब्धी हासिल गरेको छ पहिचानको लडाइ लड्नेहरुका लागि ?
कि तपाइको संगठनको क्षेत्र भित्र पर्दैनन् यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक ? आखिर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु पनि मानिस हुन नि । यो कुराको जबाफ दिनु हुन पनि म तपाईं मानव अधिकार बादीका रक्षक हौ भनेर गौरबले छाती फुलाउनेहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
साथै राज्यको उपल्लो तहमा आसिन हुनुभएका राज्य सञ्चालकहरु ? एउटा सामान्य मानिसलाई जति आत्मा सम्मान र राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सुबिधाहरु पाउने अधिकार हुन्छ, एलजिबिटिआईहरुलाई पनि त्यतिनै अधिकार हुन्छ र हुनुपर्छ ।
हामी पनि नागरिक हौ । कुनै छुट्टै ग्रहबाट आएर बसेका शरणार्थी हैनौ । तपाइहरुको जस्तै हाड, छाला, मासुबाट बनेको हाम्रो शरीर । तपाईंहरुलाइ जस्तै हामीलाइ पनि भोक तिर्खा थकाइ हरेक इच्छा चाहानाहरु हुन्छन ।
फरक यति हो तपाईको अन्तर मनबाट उत्पन्न हुने इच्छ शक्ती र हाम्रो अन्तर मनले चाहाने इच्छाशक्तिमा फरक होला । के यो हाम्रो अपराध हो ? चाहेर हामी फरक लिङ्गको भएका हैनौ । यो त प्रकृतिले दिएको बर्दान हो । यसलाइ अभिसाप बुझ्ने तपाइको सोच परिबर्तन गर्न आबश्यक छ ।
देवताको पालामा समेत रहँदै अहिले चल्दै आएको फरक पहिचानको बारेमा किन टाउको दुखाइको बिषय भयो ? स्मरण होस राज्यका उपल्लो ओदाहामा असिन हुनुहुने माहामहिमहरु, अन्तर आत्माबाट उत्पन्न हुने उर्जा भन्दा ठूलो दुनियामा कसैको लागि केही हुदैन ।
यही अन्तर आत्माबाट उत्पन्न भएको प्रेरणाको कारण तपाईं हजारौ अबसरको बावजुत पनि बर्षौ जेल नेल भोगेर राजनीतिमा होमिनु भयो । यो सिवाय तपाईको अन्तर मनले बाँकी केही सोच्नै सकेन । किनकी यो तपाईको अन्तरमनको दृढ इच्छा शक्ति थियो ।
तपाईंलाई राजनीतिक ईच्छा शक्ति अन्तरमनबाट जसरी उत्पन्न भएको थियो त्यसै गरि हामीलाई पनि जन्मजात छुट्टै लिंगको पहिचानबाट दुनियाँमा बाच्न पांउ भन्ने ईच्छा शक्तिको उत्पन्न भयो । उमेर संगै त्यो इच्छा शक्ति बढ्दै र झांगिदै गयो । तपाइको इच्छा शक्ति भन्दा मेरो अन्तरमनको चाहाना फरक लागे पनि फरक छैन ।
तपाईले जुन उर्जा उत्पन्न भएर राजनीतिको बाटो अपनाउनु भयो, मेरो अन्तर मनबाट पनि छुट्टै पहिचान खुलाएर यो देशको नागरिक भएर बाच्ने उर्जाको बिकास भयो । यो मेरो बरदान हो ।
अन्र्तमनबाट उत्पन्न भएको इच्छा शक्ती हो । माछा मार्छु भनेर सोचेर बनाएको जाल हारेर राजनीति गर्न हामफालेको युवा आफ्नो कर्मवाट जसरी रमाउछ, म पनि यो देशमा मेरो कर्मबाट रमाउन पाउनु पर्छ र रमाउन चाहान्छु ।
अहिलेसम्म आश्वासन बाहेक केही पाउन सकिरहेका छैनौ । यो भन्दा धेरै सोच्न हामीलाई बाध्य नपारियोस । यो वा उ बाहानामा भुल्याउन नखोजियो । हाम्रो धैर्यताको बाध फुट्न नदिनु होला ।
(महिला पुरुष भन्दा फरक लैंगिक पहिचानमा आफूलाई उभ्याएकी जेसिका खुल्न नसकेकी एलजिबिटिआई भित्रकी अल्पसंख्यक हुन ।)
उनको पहिलो लेख पढ्नुहोस : मलाई श्रीमतीसँग सुत्ने चाहनै छैन….